Biti In Custody After Zambia Deports Him — Leadership Newspaper
Biti In Custody After Zambia Deports Him
Former finance minister and opposition leader Tendai Biti was on Thursday put in custody by Zimbabwean police after Zambian authorities rejected his bid for asylum and deported him, his lawyers said.
“The information we have is that he is now being escorted back to Harare by detectives,” said Alec Muchadehama, one of several Zimbabwean lawyers representing Biti, told Reuters.
Police national spokeswoman Charity Charamba said she had no information on Biti’s case.
Biti, whose People’s Democratic Party had formed an election alliance with Chamisa’s Movement for Democratic Change (MDC), had been in hiding since last week and had feared for his life, another of his lawyers, Nqobizitha Mlilo, said.
2019: Youths Urged To Shun Violence Thuggery